ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာ ၃၀ နီးပါး ထိုင်းဖမ်းဆီး - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာ ၃၀ နီးပါး ထိုင်းဖမ်းဆီး
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ကမ်ချနဘူရီပြည်နယ်၊ တာ့ခ်ပြည်နယ်၊ ချင်းရိုင်ပြည်နယ်တွေမှာ လူကုန်ကူးခံရတဲ့ မြန်မာ ၃၀ နီးပါး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေ နိုင်ငံထဲ လာရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားချိန် ခုလိုလူကုန်ကူးခံရသူတွေ ဖမ်းမိတဲ့အကြောင်း ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းထောက် မအေးအေးမာက ပြောပြပါတယ်။
ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ် ချင်းရိုင်ပြည်နယ်ထဲက မယ်ဆိုင်တာချီလိတ် ချစ်ကြည်ရေးတံတားအနီးမှာ ထိုင်းနိုင်ငံထဲ တရားမဝင် ဝင်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၇ ဦး ကို ဧပြီလ ၁၈ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ညက ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။ အခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်း ထိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံဖက်ကနေ လူကုန်ကူးခံရသူတွေကို ထိုင်းဖက်က ဖမ်းမိတဲ့အကြောင်း ထိုင်းတောင်ပိုင်းအခြေစိုက် ပညာရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်တဲ့ FED အဖွဲက အလုပ်သမားရေးလှုပ်ရှားသူ ဦးမင်းဦးက အခုလိုပြောပါတယ်။
" မြောက်ပိုင်းမဲဆိုင် တာချီလိတ် ဘက်မှာ တရားမဝင်ခိုးဝင်လာတဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့လာတဲ့မြန်မာ ၁၇ယောက်ဖမ်းမိတယ် ။ သူတို့ကိုဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာတွေတော့မသိရသေးဘူး ။ ကမ်ချနဘူရီပြည်နယ် စံခဘူရီမြိုနယ်ထဲမှာလည်း ၆ ယောက်မိတယ် ယောက်ကျားလေး ၅ဦး မိန်းကလေး ၁ဦးမိတယ်"
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ် ပထမလှိုင်းဖြစ်တဲ့ ၂၀၂၀ မတ်လကစလို့ မြန်မာအပါအဝင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေ နိုင်ငံထဲဝင်ရောက်တာကို ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတာပါ။ ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်းတုန်းကလည်း စမွတ်စခွန်းပြည်နယ် ထဲက ပင်လယ်စာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေဆီက စတင်ကူးစက်ခဲ့တာကြောင့် နိုင်ငံတွင်းမှာကို ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေ တနယ်နဲ့ တနယ်သွားလာတာကို အထူးကြပ်မတ် ကန့်သတ်ထားတာပါ။
"၂၀၂၀ ၃လပိုင်း ၂၅ရက်နေ့ကတည်းကစပြီး နယ်စပ်တွေပိတ်လိုက်တာ ကိုဗစ်ကြောင့်ပိတ်လိုက်တာအဝင်အထွက်တွေပိတ်လိုက်တာ အဲဒီထဲကပြန်ဝင်ဖို့က အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်ထဲကကော တခြားနိုင်ငံတွေက ဝင်တာတွေလည်းအကုန် အခက်အခဲဖြစ်ကုန်တာ အဲဒီထဲကစပြီးတရားမဝင်တဲ့နည်းနဲ့ ထိုင်းထဲဝင်ဖို့လုပ်ကြတာပဲ။ MOU နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်နဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျန်းမာရေးအရ ကန့်သတ်ချက်များတယ်။ အလုပ်ရှင်တွေကတာဝန်မယူနိုင်ဘူး။ စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာတွေမှာထားဖို့ကိစ္စတွေကိုလည်းအဆင်မပြေဘူး။ အဲဒီအချိန်ကတည်းက ခေါ်ဖို့နောက်ဆုတ်သွာတာ အခုချိန်ထိ ရောက်သွားတယ်။ ဒီလိုအကြပ်အတည်းတွေကြောင့်ပွဲစားတွေက အကြောင်းပြချက်နဲ့ လူကုန်ကူးတာတွေ လုပ်လို့ပိုကောင်းသွားကြတယ် "။
အခုလို အခြေအနေမှာ ချင်းရိုင်ပြည်နယ်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံဖက်က တရားမဝင် ဝင်လာနေသူတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ မယ်ဆိုင်ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့က အခုရက်ပိုင်း တင်းတင်းကြပ်ကြပ် စစ်ဆေးနေပါတယ်။ ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့ကလည်း မယ်ဆိုင်မြို့ ဗဟိုရိုသင်လမ်းမပေါ်မှာ မောင်းလာတဲ့ ဗင်ကားထဲကနေ တရားမဝင် ဝင်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၇ ယောက်ကို ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ ဖမ်းမိသူတွေဟာ မန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးဘက်ကလာကြတဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ကြပြီး၊ ထိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ လူပွဲစားတွေနဲ့ လာခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့နဲ့အတူ အသက် ၅၇ နှစ်အရွယ် ထိုင်းယာဉ်မောင်းကိုလည်း ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့မှာပဲ တာခ့်ပြည်နယ်၊ မဲဆောက်မြို့မှာ တရားမဝင် ဝင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား ၅ ယောက်ကိုလည်းဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသား လူကုန်ကူးသူ ကျော်သက်ဦး ဆိုသူကိုလည်း သူရှောင်ပုန်းနေတဲ့ စမုတ်ဆာခွန်းပြည်နယ်အတွင်းက နေအိမ်တအိမ်မှာ ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းသတင်းတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။
မအေးအေးမာ/ VOA Burmese
Labels: Myanmar News
Sep 2021 ( 10 )
Aug 2021 ( 139 )
Jul 2021 ( 234 )
Jun 2021 ( 294 )
May 2021 ( 509 )
Apr 2021 ( 715 )
Mar 2021 ( 1224 )
Feb 2021 ( 1297 )
Jan 2021 ( 304 )
Dec 2020 ( 306 )
Nov 2020 ( 280 )
Oct 2020 ( 328 )
Last7days Pageviews
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၄၉ ေနရာအျပည့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္
ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ တာဝန္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇူလုိင္ ၂၉ ရက...
ကားေပၚတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ မသန္းသန္း၀င္း တစ္ေယာက္ ကမၻာပ်က္သည့္အလား ေအာ္ ဟစ္ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ လန္႔ႏုိး လာသည္။ အိပ္ရာမွ ႏုိးႏုိးခ်င္း ၎တို႔ဇနီ...
ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ဖြဲ႔စည္းပံုကိစၥ အဓိကေဆြးေႏြး
ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႕ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီနဲ႔ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ကစၿပီး က...
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း Facebook သုံးစြဲသူ ၁ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္ရွိ
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၄ ကမာၻတြင္ ေအာင္ျမင္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း လူသုံးအမ်ားဆုံး လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ Facebook ကို ျပည္တြင္းသုံးစြဲ...
ၾသဂုတ္လ (၂၄)ရက္ေန ့ထုတ္ ေၾကးမုံ ေန ့စဥ္ သတင္းစာ
ၾသဂုတ္လ (၂၄)ရက္ေန ့ထုတ္ ေၾကးမုံ ေန ့စဥ္ သတင္းစာ သတင္းစာ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ
ဇူလုိင္လ (၂၉)ရက္ေန ့ထုတ္ နံနက္ခင္း သတင္းဂ်ာနယ္ အတဲြ(၃)၊ အမွတ္ (၆၁၄)
ဇူလုိင္လ (၂၉)ရက္ေန ့ထုတ္ နံနက္ခင္း သတင္းဂ်ာနယ္ အတဲြ(၃)၊ အမွတ္ (၆၁၄) ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ
ျပည္တကၠသုိလ္ ကထိကဆရာမတစ္ဦးကုိ ပါး႐ုိက္သည့္ ေက်ာင္းသားအား ပညာသင္ၾကားခြင့္ ငါး ႏွစ္ရပ္ဆုိင္း
ဓာတ္ပုံ - ျပည္တကၠသိုလ္အေ၀းသင္ေကာ်င္းသား/သူမ်ား (facebook) ျပည္တကၠသုိလ္မွ ကထိကဆရာမတစ္ဦးအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ပါး႐ုိက္ခဲ့သည့္ ဒုတိယႏွစ္ ဂုဏ...
က်ိဳက္မေရာ လမုခိုေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း က်ားကိုက္ခံရသည့္ဟု ယူဆရသည့္ ႏြားေသ ေပ်ာက္ဆံုးမႈရွိေန
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ လမုခိုေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ...
Eleven Media CEO ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ တိုက္ခိုက္ခံရ
(ဓာတ္ပံု - eleven media) Eleven မီဒီယာရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သူေတြ စီးနင္းလာတယ္ဆိုတဲ့ တကၠစီ...
မတ္လ (၁၀)ရက္ေန ့ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း ေန ့စဥ္ သတင္းစာ
မတ္လ (၁၀)ရက္ေန ့ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း ေန ့စဥ္ သတင္းစာ သတင္းစာ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ
Copyright © 2014. THIT HTOO LWIN (Daily News)
Design by THIT HTOO LWIN . Published by THIT HTOO LWIN